त्यसबेला हामी दुवै विज्ञान विषयका विद्यार्थी थियौं । म अमृत साइन्स कलेज (अस्कल)मा आईएस्सी पढ्दै थिएँ । ऊ पनि त्रिचन्द्र कलेजमा आईएस्सी नै पढ्दै थियो । म झोंछे, यङ्गालको, ऊ यट्खाको । यो २०३५ सालको कुरा हो । त्यसै वर्ष तिहारमा नवीन्द्र र मेरो चिनजान भएको थियो ।
त्यसपछि हामीबीच भेटघाट र सरसल्लाह भइरहन्थ्यो । मैले बीएस्सी पनि अस्कलमै गरें । उसले त्रिचन्द्रबाटै बीएस्सी गर्‍यो । २०३९ सालमा त्रिचन्द्र कलेजको स्ववियू निर्वाचनमा नेविसंघबाट दीपक गिरी अध्यक्ष र नवीन्द्रराज जोशी सचिवका उम्मेदवार थिए । उता, म नेविसंघ अस्कल इकाईको सक्रिय कार्यकर्ता थिएँ । गोवर्धन राना अस्कलका निकै चर्चित नेता थिए । चुनावको सिलसिलामा त्रिचन्द्रका साथीहरूलाई अस्कलमा आमन्त्रण गरेर बास्केट बल ग्राउन्डमा कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौं । उक्त कार्यक्रम भाँड्न सरस्वती क्याम्पसतिरका अखिलका विद्यार्थीले हामीमाथि आक्रमण गरेपछि हानाहान र कुटाकुट भएको थियो । आक्रमणकारीहरूको निशाना गोवर्धन भए पनि ऊ त्यसबाट बच्न सफल भयो तर दीपक गिरीमाथि खुकुरी प्रहार हुँदा उसको टाउकोमा ठूलो चोट लागेको थियो । रगताम्मे गिरीलाई हामीले ट्याक्सीमा राखेर वीर अस्पताल पुर्‍यायौं ।
त्यसपछि सम्पन्न स्ववियू निर्वाचनमा अस्कलमा नेविसंघका अध्यक्षका प्रत्यासी गोवर्धनले जिते । त्रिचन्द्रका अध्यक्षका प्रत्यासी दीपकले हारे, तर सचिवमा नवीन्द्रले बाजी मारे । त्यो निर्वाचन नै नवीन्द्रलाई राजनीतिमा चर्चित बनाउने प्रमुख घटना बन्न पुग्यो । धाराप्रवाह राजनीतिक भाषण गर्न सक्ने उसको कलादेखि हामी मन्त्रमुग्ध हुन्थ्यौं । त्यसपछि ऊ राजनीतिमा यस्तरी लाग्दै गयो कि त्यसबाहेक उसले दायाँ–बायाँ केही सोचेन । म भने राजनीतिमा सामान्य जानकारी राखे पनि पेशा, व्यवसायतिरै बढी ध्यान दिन थालें । तैपनि हामीबीच आपसी भेटघाट र छलफल भने भई नै रहन्थ्यो ।
२०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उसले काठमाडौं नगरपालिकाको उपप्रमुखको टिकट पायो । हामी सबैले उसलाई निःस्वार्थ भावले सहयोग गर्‍यौं । उसले जित्यो पनि । चुनाव जिते पनि ऊ कहिल्यै ठूलो पल्टिएन । जनताको घरदैलोमा पुगेर सुख–दुःखमा साथ दियो ।
म उसलाई भन्ने गर्थें, ‘तिमी राजधानी काठमाडौंको मान्छे । यति धेरै लोकप्रिय युवा छौ, इमान, जमान र निष्ठा बचाउँदै स्वच्छ छवि कायम गरेर अगाडि बढ्दै गयौ भने तिम्रो राजनीतिक भविष्य सुन्दर छ ।’ मेरो भावनामा ठेस लाग्न नदिन नवीन्द्र मेरो कुराकानी र सल्लाहलाई महत्त्वसाथ लिने गर्थ्यो । म थप सचेत र सावधान गराउने उद्देश्यले भन्ने गर्थें, ‘हेर नवीन्द्र, तिमी अहिलेसम्म एकदम सही छौ । लोकप्रिय छौ । तिमीलाई देशभरका प्रजातन्त्रवादीहरूले विश्वास गर्छन् । यसलाई तिमीले जोगाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिलाई कमाई–धमाईको माध्यम बनाएर बदनाम भयौ भने चाहिं तिम्रो र मेरो सम्बन्ध रहने छैन । अहिले जस्तै इमानदार भइरह्यौ भने म तिमीलाई सक्दो साथ दिइरहनेछु ।’
२०४६ सालमा जनआन्दोलन शुरू हुँदा उसले नेविसंघ महामन्त्रीको हैसियतमा देशैभरका युवाहरूलाई नेतृत्व प्रदान गरेको थियो । आन्दोलनको सफलतासँगै बहुदल पुनर्स्थापना भएपछि ऊ राजनीतिमा झन् माझिंदै गयो । साथीभाइहरूसितको सम्पर्क र सम्बन्धमा उसले कुनै कमी आउन दिएन । ऊ र म भेट भइरहन्थ्यौं । ऊ प्रायः अरूसित सल्लाह नगरी केही पनि निर्णय झट्ट गरिहाल्दैनथ्यो । सोची, विचार गरी मात्र निर्णय लिने उसको स्वभाव मलाई मन पर्थ्यो ।
२०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उसले काठमाडौं नगरपालिकाको उपप्रमुखको टिकट पायो । हामी सबैले उसलाई निःस्वार्थ भावले सहयोग गर्‍यौं । उसले जित्यो पनि । चुनाव जिते पनि ऊ कहिल्यै ठूलो पल्टिएन । जनताको घरदैलोमा पुगेर सुख–दुःखमा साथ दियो । जनताबाट पनि अपार माया पाइरह्यो । केही न केही नयाँ गरौं भन्ने उसको सोच देखिन्थ्यो । त्यही हुटहुटीले होला उसले सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह जीवितै हुनुहुँदा उहाँको नाउँमा प्रतिष्ठान खोल्ने सोच बनाएर छलफल चलायो । मसँग पनि यसबारे कुराकानी गर्‍यो । उसको प्रस्ताव मन परेपछि यसमा पूरापूर साथ र सहयोग गरें । गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले पछि ‘वीर गणेशमान’ सिनेमा बनायो । त्यो पनि सफल भयो ।
नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको जीवनीमा आधारित चलचित्र ‘वीर गणेशमान’ को एउटा पोस्टर ।
हामी उसलाई भित्रबाट सहयोग गरिरहेका थियौं, ऊ राजनीतिक यात्रामा इमानका साथ अगाडि बढिरहेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाको उपप्रमुखको जिम्मेवारी पनि सफलतासाथ निर्वाह गर्‍यो । हामी उसलाई २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरको प्रमुख भएको देख्न चाहन्थ्यौं, तर पार्टीले टिकट दिएन । ऊ केही दिन वेचैन देखियो । हामी त्यो वेचैनीबाट मुक्त हुनका लागि एकदिन ककनीतिर गयौं । हामीले उसलाई ‘यो मात्रै अवसर होइन, राजनीतिमा यस्ता अवसर धेरै आउँछन् तर अब आउने अवसरलाई कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भनी सोच्नुपर्छ । गुमेको अवसरलाई चिन्ता गरेर केही हुँदैन’ भन्यौं । ‘आवेशले आफैंलाई गुमाउँछ, धैर्यले संसार जिताउँछ’ भन्ने उसले नबुझ्ने कुरै थिएन । केही दिनपछि ऊ फेरि साबिककै अवस्थामा फर्किहाल्यो । आखिर राजनीतिक व्यक्तित्व न हो ऊ ।
हामीले उसलाई भन्यौं, ‘अब तिमी राजनीतिक रूपमा अलि फुर्सदिलो भयौ । तिमीले गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानमा बढी समय दिनुपर्छ । समसामयिक विषयमा विभिन्न क्षेत्रका जानकारहरूलाई भेला गराएर बहस र छलफल गराउनुपर्छ ।’ उसले प्रतिष्ठानको मञ्च प्रयोग गरेर बौद्धिक बहस र छलफललाई अगाडि बढाउन थाल्यो । त्यसले पनि नवीन्द्रको व्यक्तित्वमा थप निखार ल्याउन सघायो भन्ने लाग्छ । माओवादी द्वन्द्वको त्यो अप्ठेरो समयमा पनि उसले जनताको घरदैलो गर्न भने छाडेन ।
२ असोज २०५४ मा लौहपुरुष गणेशमान सिंहको निधन भयो । जुन दिन लौहपुरुष बित्नुभयो त्यही दिन नवीन्द्र जापानको विमानस्थलमा ओर्लेको थियो । ओर्लेकै दिन उसले मलाई फोन गरिहाल्यो । मैले उसलाई ‘यहाँ गणेशमान सिंह बित्नुभयो, त्यसैले तिमी अर्को उडानबाट नेपाल फर्क’ भनें । ऊ त्यही विमानस्थलबाट अर्को उडान समातेर तत्काल नेपाल फर्किएपछि गणेशमान सिंहको अन्त्येष्टिमा हामी सहभागी भयौं ।
ऊ हाम्रो नेता थियो, हामी उसका सहयोगी । पार्टीभित्र नेताहरूबीच मनमुटाव बढ्दा पार्टी विभाजन हुन्छ कि भनी चिन्तित हुन्थ्यो । नभन्दै, २०५९ असारमा पार्टी विभाजन हुनपुग्यो । त्यसबेला हामीले अब के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भनी सल्लाह गर्‍यौं । हाम्रो एउटै मत थियो–काठमाडौंको राजनीतिमा प्रकाशमान सिंह दाइ जता हुनुहुन्छ त्यतै रहनु उचित हुन्छ । ऊ पनि नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकतिरै उभियो । प्रकाश दाइसित मिलेरै राजनीति अगाडि बढाउने नीति अंगीकार गर्दै अगाडि बढिरह्यो ।
१९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले राज्यसत्ता हात लिएपछि दलहरू एक भए । दोस्रो जनआन्दोलन उठ्यो । त्यसमा पनि हामी सहभागी भयौं । ऊ आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै सडकमा जान्थ्यो, म भने आन्दोलनको पक्षधरका नाताले भित्रभित्र सहयोग गर्थें । जनआन्दोलन सफल भयो । २०६४ चैतमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा उसले टिकट पायो । हामी एकै क्षेत्रमा थियौं । मैले उसलाई जे सकिन्छ पूरा सहयोग गरें । उसले चुनाव जित्यो र संविधानसभामा एकदम राम्रो भूमिका खेल्यो । उसको राजनीतिक इमान र सफलता देखेर म एकदम खुशी थिएँ । उसले चुनाव जितेपछि सबैभन्दा पहिले सगुन दिने मै थिएँ । २०६६ सालमा म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सदस्य निर्वाचित भएपछि उसैले सबैभन्दा पहिला मलाई सगुन दिएर सम्मान गरेको थियो ।
२०६७ सालमा हुन गइरहेको पार्टीको १२औं महाधिवेशनअघि सभापतिका प्रत्यासी सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीच दूरी बढेपछि उसले त्यसलाई कम गर्ने सोच बनायो । एकदिन उसले बूढानीलकण्ठको मेरै निवासमा कोइराला र देउवालाई आमन्त्रण गरेर मिलनबिन्दुको खोजी गरेको देख्दा मलाई लाग्यो– नवीन्द्र पार्टीमा मेलमिलापको बलियो खम्बा हो ।
हामी यति नजिकका साथी थियौं कि बेला बेलामा पारिवारिक रूपमा कहिले उसको घरमा त कहिले मेरो घरमा भेला भएर खाना खाने र सुख–दुःखका कुरा साटासाट गर्ने गर्थ्यौं ।
२०६७ सालमा हुन गइरहेको पार्टीको १२औं महाधिवेशनअघि सभापतिका प्रत्यासी सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीच दूरी बढेपछि उसले त्यसलाई कम गर्ने सोच बनायो । एकदिन उसले बूढानीलकण्ठको मेरै निवासमा कोइराला र देउवालाई आमन्त्रण गरेर मिलनबिन्दुको खोजी गरेको देख्दा मलाई लाग्यो– नवीन्द्र पार्टीमा मेलमिलापको बलियो खम्बा हो । प्रजातन्त्रको बफादार सिपाही हो । आफ्नो साथीको प्रजातन्त्रको सबलीकरणको सत्प्रयास देख्दा म ज्यादै खुशी भएको थिएँ ।
यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकको राजनीति चाहे जति सहज र सङ्लो हुन नसक्दा ऊ ज्यादै चिन्तित हुन्थ्यो । कसरी प्रजातान्त्रिक र राजनीतिक संस्कार विकास गर्ने होला भनी छलफल गरिरहन्थ्यो । २०६९ सालमा संविधान नै नलेखी संविधानसभा विघटन गराइयो । फेरि राजनीतिक अन्योल र अस्थिरता सिर्जना हुन पुग्यो । २०७० साल मंसिरमा दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन हुने भयो । उसलाई हाम्रो क्षेत्रबाट टिकट दिइयो । हामी सबै एकजूट भएर उसलाई जितायौं । यही सभाले सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान लेख्यो । त्यसबेला पनि उसले अप्ठेरो पर्दा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्‍यो ।
नवीन्द्रले कहिल्यै धैर्य गुमाएन, जनताको सेवक बनेर भूकम्पमा परेर आहत भएकाहरूको सेवामा जुट्न कत्ति पनि कमी गरेन । उद्धार, उपचार र त्यसपछिको सेवामा एकचित्त भएर खट्यो । ऊ जनसेवामा अविराम दिलोज्यानले खटेको देख्दा अचम्म लाग्थ्यो । म उसलाई बेला–बेलामा आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गरेर खट है भन्थें ।
२०७३ साउनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌मा नवीन्द्र उद्योग मन्त्री नियुक्त भयो । कसैले महत्त्व नदिने उद्योग मन्त्रालयप्रति ऊ मन्त्री भएपछि सबैको ध्यान जान थाल्यो । किनकि, मन्त्री भएपछि उसले बन्द नेपाल औषधि लिमिटेडलगायत उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्‍यो । नयाँ उद्योगधन्दाहरू खोल्नेबारे योजनाहरू बनाउन थाल्यो । योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त उसले निजी क्षेत्रको उत्साह भर्न र बाह्य राष्ट्रका लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छ भन्ने विश्वास दिलाउन अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो । त्यसमा मैले उसलाई समितिमै बसेर सहयोग गरें । सम्मेलन निकै सफल भयो ।
लोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि २०७४ सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा भने ऊ झिनो मतले पराजित भयो । राजनीतिक प्राणी भएकाले अर्को चुनाव जित्ने प्रतिबद्धतासाथ खट्दै थियो । उसलाई एक्कासी ‘माइनर अट्याक’ भएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारपछि ठीक भयो । त्यसपछि पनि उसको स्वास्थ्य राम्रै थियो । त्यति ठूलो समस्या भएको थाहा थिएन ।
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले नेपाललाई पनि किन छाड्थ्यो र ? हामी पनि बन्दाबन्दीमा परिहाल्यौं । संसारै बन्दाबन्दी भएका बेला हामी मात्र किन अलग रहन सक्थ्यौं र ? त्यस्तो बेला पनि नवीन्द्रले जनताको घरदैलोमा मास्क, स्यानिटाइजर लगायत आवश्यक औषधि पुर्‍याउने कामको समन्वय गर्न भने छाडेन । किनकि, ऊ जनताको सुख–दुःखको नेता थियो ।
हाम्रोबीच प्रत्यक्ष भेटघाट नभएको पनि धेरै भइसकेको थियो । पहिलो चरणको कोरोना अलि मत्थर हुँदै गएको थियो । मेरो छोरा क्यानडाबाट फर्किएको थियो । उसैले फोन गरेर जनवरीमा भेट्ने भन्यो । फेरि फोन गरेर अलि सञ्चो भएन, खानपिन गर्न पनि केही हुँदैन त्यसैले अलि पछि भेट्न आउने कुरा गर्‍यो । यसरी दुई/तीन पटक उसैले समय सारेको थियो । १३ फागुन २०७७ बिहीबारको दिन फोन गरेर आज घरैमा हुन्छौ भनेर सोध्यो । मैले हुन्छु भनेपछि आज साँझ भेट्न सकिन्छ त भनी सोध्यो । मैले सकिन्छ भनेपछि उसले आफू, श्रीमती सपना र छोरी निऋतिलाई पनि लिएर साँझ सवा ७ बजे आउने कुरा गर्‍यो ।
१३ फागुन २०७७ को साँझ साथी ओम राजभण्डारीको सीतापाइलास्थित निवासमा प्रवेश गर्दै नवीन्द्रराज जाेशी । करीब चार घण्टा त्यहाँ बिताएर उनी घर फर्केका थिए ।
सीतापाइलास्थित कम्फर्ट हाउजिङको मेरो घरमा बस्ने कुरा भयो । ऊ भनेको बेलामा कहिल्यै नपुग्ने मानिस । तर त्यो दिन भने ७ः१९ बजे नै आइपुगेको देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो । मनमनै सोचें साथी नवीन्द्रले समयको ख्याल गर्न थालेछ । अहिले पनि त्यो दिन ऊ, श्रीमती र छोरीसहित हाम्रो घर आएको अनि म, मेरो छोरा र श्रीमती कुराकानी गरेको, उसले मेरो छोरालाई सम्झाएको र खाना खाइवरी राति ११ः१८ बजे विदाइ भएको आत्मीय मित्रको निधन भएको विश्वासै लाग्दैन । तर विश्वास नगरेर पनि के गर्ने ? उसले हामीलाई छाडेर गएको पनि एक वर्ष बितिसकेछ । अहिले उसको सम्झना हुनासाथ म मोबाइलमा ‘अपलोड’ गरिराखेको सीसी क्यामेरा फुटेज हेरेर चित्त बुझाउने गर्छु । यसमा ऊ आएको र गएको बेलाको सबै दृश्य कैद भएका छन् ।
१३ फागुन २०७७ को राति ‘डिनर’ खाएर साथी ओम राजभण्डारीको निवास (सीतापाइला)बाट बिदा हुँदै नवीन्द्रराज जाेशी र परिवार । यसको करीब एक घण्टापछि उनलाई मस्तिष्कघात भएर अस्पताल लगिएको थियो ।
हामीकहाँबाट घर फर्किएको करीब एक घण्टापछि उसलाई ‘स्ट्रोक’ भएछ । सपनाले वीर अस्पताल लगिछन् । उनले आत्तिएर फोन गरेपछि म, मेरी श्रीमती र छोरा अस्पतालमै पुग्यौं । त्यहाँबाट नर्भिक पुर्‍यायौं । करीब एक महीनाको उपचारपछि उसले हामीलाई छाडेर अनन्तको यात्रामा गयो । अल विदा साथी ।
(व्यवसायी राजभण्डारी जोशीका विद्यार्थी कालदेखिका घनिष्ठ साथी हुनुहुन्छ । यो सामग्री ‘नवीन्द्रराज जाेशी : व्यक्तित्व र योगदान’ पुस्तकबाट लिइएको हो। जाेशीको वार्षिक पुण्यतिथिको अवसरमा ‘नवीन्द्रराज जोशी स्मृति प्रतिष्ठान’ले हिजाे (१३ चैत) पुस्तक सार्वजनिक गरेको हो । –सम्पादक)
प्रकाशित: Monday, March 28, 2022 | 07:00:00 सोमबार, १४ चैत, २०७८